Brezila: Tsy Te-Hahita Ny Anarany Ety Anaty Tranonkala Ireo Mpanandevon’ny Vaninandro Maoderna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2015 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, македонски, русский, English
Manome ny lisitr'ireo orinasa izay tratra manararaora mpiasa amin'ny fomba fanao mitovy amin'ny fanandevozana ilay lisitra malaza ratsy ao Brezila “lisitra maloton'ny andevon'ny asa”. Nataon'ny Ministeran'ny Asa sy ny Fampanànana Asa tamin'ny 2003, imbetsaka no efa nasongadin'ilay lisitra ny orinasan'ireo Breziliana malaza mpandraharaha sy mpanao politika.
Fanampin'ilay lisitra ofisialy avy amin'ny Ministera, mitatitra tsy tapaka koa ny Reporter Brasil, ilay ONG sangany ao amin'ny firenena amin'ny fiarovana sy fitaterana momba ny zon'ny mpiasa, ary manasongadina ireo orinasa hita ao anatin'ilay antsoina hoe lisitra maloto. Fa nisy didim-pitsràna vao haingana mety hanova ireny ezaka ireny ho amin'ny mangarahara.
Ny Desambra 2014, namoaka didy ny fitsarana antampony ao Brezila nandràra ny Ministeran'ny Asa sy ny Fampanànana Asa tsy hamoaka ilay lisitra ao anatin'ny tranonkalany na hizara izany amin'ireo media ao an-toerana. Ity didy ity dia navoaka ho setrin'ny raharaha iray nentin'ny Fikambanan'ireo Breziliana Tomponà orinasam-pampandrosoana (ABRAINC) teny amin'ny fitsaràna, izay nilazàny ny tsy fampian'ny lalàna ao Brezila hifehezana ny karazana lisitra tahàka izany, ary hoe tafiditra aminà raharaha tsy nanaraka dingana araka ny lalàna ireo mpampiasa, manohintohina ny tsy mbola filazàna ny olona iray ho efa meloka sy ny zon'izy ireo handà ny filazàna tahaka izany araka ny lalàna. Nandray fanapahana ny Fitsaràna Antampony hampiato ilay famoahana lisitra, mandra-pahavitan'ny raharaham-pitsaràna mahakasika ny ABRAINC.
Ahitàna ireo mpandraharaha sy vondron'orinasa goavana indrindra ao Brezila ny ABRAINC, ary ny filohan'izy io dia efa in-dimy no tratra nampiasa ny fomba fampanaovna asa an-terivozona tao anivon'ireo orinasany MRV Engenharia, izay voasongadina tao anatin'ilay lisitra maloto.
Volana maro taorian'ilay didin'ny Fitsaràna Antampony, namoaka lisitra iray vaovao indray ny Ministeran'ny Asa sy ny Fampoanànana Asa, notohanan'ilay Lalàna momba ny Fahazoan'ny Breziliana Hahazo Vaovao, lisitra mitovy votoaty tamin'ilay taloha ihany. Ny 19 Oktobra, namoaka tatitra ofisialy manohana ny famoahana ilay lisitra tao amin'ny media ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Brezila, Rodrigo Janot. Na haharitra na tsia no hahafahana mahita ity lisitra ity, mifofotra miezaka manao izy tsy hahitàn'ny mason'ny olona azy io ireo tsy mpankasitraka azy.
Ny Oktobra 2015, nisy didy iray vaovao nitaky tamin'ny Reporter Brasil hamafa ireo vaovao rehetra tao amin'ny tranonkalany mahakasika ny Morro Verde Participações, iray amin'ireo orinasa voalaza ao anatin'ny lisitra maloto nivoaka farany indrindra.
Talohan'ny fanerena hanaisotra ny vaovao rehetra momba ilay orinasa, nitatitra ny Reporter Brasil fa mànana vala fiompiana ao Xinguara, any amin'ny fanjakana Pará ao avaratr'i Brezila, ny Morro Verde Participações S/A. Ny Janoary 2014, olona 23 no hita sy novonjen'ireo manampahefana ho afaka tamin'ny fomba fampiasàna miendrika fanandevozana tao amin'ilay toerana fiompiana.
Manahy ny amin'ny fifandraisan'ireo tranga roa ireo ny mpikambana ao amin'ny Reporter Brasil. “nitranga [io] satria tsy vitan'ny governemanta Breziliana ny mamerina mametraka ny rejisitr'ireo mpampiasa tratra mampiasa toy ny andevo,” hoy izy ireo tao anaty taratasy iray nanazavany ny sivana vao haingana niainany. Tena inoanan'ilay fikambanana fa dingana lehibe tsy maintsy izorana ho amin'ny fitazonana ireny orinasa ireny ho tomponandraikitra amin'ireny fomba fanao ireny ny fangaraharàna.
Avy ao amin'ny Fitsaràn'ny Distrikan'i Salvador, renivohitry ny fanjakana Bahia, i Argemiro de Azevedo Dutra, ilay mpitsara nitarika ny fandinihana ilay raharaha. Morro Verde S/A dia mbola voasoratra ihany koa any amin'ny fanjakàn'i Bahia. Azevedo Dutra koa voatanisa ao anatin'ilay lisitra ao amin'ny tranonkalan'ny Filankevitra Mpanao Lalàna ao amin'ny Fanjakàna, ho toy ny tomponà toerana fiompiana, ankoatry ny fisahanany asa hafa. Manodidina ny 40% amin'ireo orinasa voalaza ao anatin'ilay lisitra nivoaka farany no misahana fandraharahàna momba ny fiompiana, arahan'ny fitrandrahana àla (25%), ny fambolena (16%) ary ny fanorenana (7%).
Efa ho 15 taona mahery, niezaka hatrany ny Reporter Brasil nandresy lahatra mba handaniana ny volavolan-dalàna momba ny Asa Fanandevozana, izay milaza ao anatiny fa ireo fanànana/toerana rehetra tratra mampanao asa fanandevozana dia ho alain'ny fanjakana hiverina amin'ny fanjakàna. Efa eo amin'ny dingana farany ho fampandaniana azy ilay lalàna izao.
Hatramin'ireo fiovàna farany ireo, rafitra iray nahitàn'ny farahamonina vokatra ny nisian'ilay lisitra maloto mba hanaovana tsindry amin'ireo mpanitsakitsaka ny zon'ny mpiasa ireo. Mmomba ny fanarenana azy io, tsy mbola ato ho ato no hifàrana ny adin'ny governemanta, ny fiarahamonim-pirenena, ireo orinasa sy ny fitsaràna.